“Ọ dị otu mgbe m gara oriri. N’echi ya, ndị mmadụ malitere ikwu na mụ na otu n’ime ụmụ okorobịa ndị bịara oriri ahụ nwere mmekọahụ. Ọ bụtụdịghị eziokwu!”—Linda.
“Mgbe ụfọdụ, ana m anụ asịrị e ji m na-agba na m nwere enyi nwaanyị. Ma n’eziokwu, ahụtụbeghị m onye ọ bụ! Ọtụtụ ndị asịrị anadịghị achọ ịma ma ihe ha na-ekwu ọ̀ bụ eziokwu.”—Mike.
Ọ BỤRỤ na e jiri gị gbaa asịrị, a ga na-akọ banyere gị karịa otú e si akọ banyere ndị na-eme fim. Ụdị ihe ahụ mere otu nwa agbọghọ dị afọ iri na itoolu aha ya bụ Amber. O kwuru, sị: “Ndị mmadụ ejirila m gbaa asịrị ọtụtụ ugboro. Ha sịrị na m dị ime, na mụ eteela ime ọtụtụ ugboro, na m na-ere ọgwụ ike, na m na-azụ ọgwụ ike, na-aṅụkwa ọgwụ ike. Gịnị mere ndị mmadụ ji agba m ụdị asịrị a? N’eziokwu, amaghị m!”
Ebe ọ bụ na e nwere ike iji kọmputa na ekwe ntị zie ozi n’egbughị oge, nwa okoro ma ọ bụ nwa agbọghọ nke bu ihe ọjọọ n’obi nwere ike imebi aha gị n’ekwughị okwu ọ bụla. Naanị ihe ọ ga-eme bụ iji ekwe ntị ma ọ bụ kọmputa dee mkpụrụ okwu ole na ole jọgburu onwe ha, zigara ya ọtụtụ ndị chọrọ ịnụ! E nweela ebe ụfọdụ a na-edebe ihe ọmụma n’Ịntanet, bụ́ ndị a na-eji emebi aha ndị mmadụ. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-enwe ebe ha na-ede ihe. N’ebe ahụ, a na-agụtakarị ụdị asịrị ndị mmadụ na-agaghị ejili ọnụ ha kọọ.
Ma, ọ̀ bụ mgbe niile ka ikwu banyere ndị ọzọ dị njọ? Ọzọkwa, . . .
Ò Nwere Mgbe Ịkọ Banyere Ndị Ọzọ Dị Mma?
Kanye akara n’eziokwu ma ọ bụ n’ụgha n’ahịrịokwu na-esonụ.
Ọ dị njọ mgbe niile ịkọ banyere onye ọzọ. □ Eziokwu □ Ụgha
Olee nke bụ́ azịza ya? N’ezie, ọ dabeere n’ihe a na-akọ banyere onye ahụ. Ọ bụrụ na ihe a na-akọ banyere onye ahụ agaghị emebi aha ya, o nwere ike ịbụ na ọ dịghị njọ. A sị ka e kwuwe, Baịbụl gwara anyị ka anyị “na-eleba anya n’ihe banyere ndị ọzọ na ihe ha na-eme.” (Ndị Filipaị 2:4, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society) Ọ pụtaghị na anyị kwesịrị inyonye anya n’ihe na-agbasaghị anyị. (1 Pita 4:15) Ma a na-esikarị ná mkparịta ụka nkịtị anụ akụkọ bara uru, dị ka ihe atụ, onye na-aga ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma ọ bụkwanụ onye mụrụ nwa. N’eziokwu, anyị enweghị ike ikwu na ihe banyere ndị ọzọ na-emetụ anyị n’obi ma ọ bụrụ na anyị anaghị ekwu banyere ha!
Ma, e nwere ike isi ná mkparịta ụka nkịtị banye n’ịgba asịrị. Dị ka ihe atụ, onye na-ebughị ihe ọjọọ n’obi nwere ike ịsị, “Ihe ga-adabara Emeka na Nkechi ma ha lụọ.” Mgbe onye nụrụ ya chọrọ ịkọrọ ya onye ọzọ, o nwere ike ịsị, “Emeka na Nkechi achọwala ịgba akwụkwọ”—n’agbanyeghị na ụdị ihe ahụ abatatụbeghị Emeka na Nkechi n’obi. I nwere ike ikwu na o nweghị ihe o mere. Ma ọ bụrụ na ị bụ Emeka ma ọ bụ Nkechi, ị ga-ama na ọ dị ihe o mere!
E ji otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ aha ya bụ Julie gbaa ụdị asịrị ahụ, ya agbawaa ya obi. O kwuru, sị: “Ọ kpasuru m iwe, meekwa ka m ghara ịma onye m ga-atụkwasị obi.” Ụdị ihe ahụ mere nwa agbọghọ ọzọ dị afọ iri na itoolu aha ya bụ Jane. O kwuru, sị, “Emechara m gbawara nwa okorobịa ahụ a sịrị na mụ na ya chọrọ ịlụ ọsọ. Ama m na ọsọ m na-agbara ya adịghị mma n’ihi na mụ na ya dị ná mma. Echekwara m na anyị kwesịrị ịna-ekwurịta okwu n’enweghị ndị ga-eji anyị na-agba asịrị!”
Lezie Anya Ka Mkparịta Ụka Unu Ghara Ịghọ Asịrị
Olee otú ị ga-esi jide ire gị aka ma a kpawara gị asịrị? Ihe ga-enyere gị aka n’ịza ajụjụ a bụ iche echiche banyere nkà a na-eji akwọ ụgbọala n’okporo ụzọ awara awara ebe ụgbọala karịrị akarị. Ọ bụrụ na ị bụ ọkwọ ụgbọala, otu ihe nwere ike ime na mberede, gị akwọrọ ụgbọala gị gafee n’akụkụ nke ọzọ ma ọ bụ kwụsịtụ ka ụgbọala ọzọ gafere, ma ọ bụkwanụ gị akwụsịchaa kpamkpam. Ọ bụrụ na anya ruru gị ala, ị ga-ahụ ihe dị n’ihu ma mee ihe i kwesịrị ime.
Otú ahụ ka mkparịta ụka dị. I nwere ike ịmata mgbe mkparịta ụka unu ghọwara asịrị. Ọ bụrụ na o mee, ị̀ ga-eji nkà mee ka mkparịta ụka ahụ ghara ịghọ asịrị? Ọ bụrụ na i meghị otú ahụ, marakwa na asịrị na-emebi ihe. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Mike kwuru, sị: “Ekwuru m ihe na-adịghị mma banyere otu nwa agbọghọ—na ụmụ nwoke na-agba ya ara—ya emechaa nụ ya. Agaghị m echefu olu o ji gwa m okwu mgbe ọ bịakwutere m, nakwa otú okwu m kwuru n’echeghị echiche si wute ya. Anyị mechara kpezie. Ma obi adịghị mụ mma na m kwuru okwu wutere mmadụ!”
O doro anya na okwu a gwara mmadụ nwere ike iwute ya. Baịbụl kwukwara na “e nwere onye na-ekwu okwu n’echeghị echiche dị ka ebe e ji mma agha maa mmadụ.” (Ilu 12:18) Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka i chee echiche tupu gị ekwuo okwu! N’eziokwu, ọ bụrụ na mmadụ na-akọ ihe na-atọ gị ụtọ banyere onye ọzọ, ọ gaghị adị mfe ịsị ya kwụsị. N’agbanyeghị nke ahụ, i kwesịrị ime ihe otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asaa aha ya bụ Carolyn kwuru. Ọ sịrị: “I kwesịrị ịkpachara anya n’ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ na onye kọọrọ gị ihe ahụ anaghị ekwu eziokwu, ihe ị na-akọsa nwere ike ịbụ ụgha.” N’ihi ya, ọ bụrụ na ị nụ ihe nwere ike ịbụ asịrị, mee ihe Pọl onyeozi dụrụ ọdụ ka i mee, ya bụ, ‘ikpebi ibi ndụ n’ụzọ dị nwayọọ na ilekwasị anya n’ihe ị na-eme.’—1 Ndị Tesalonaịka 4:11.
Olee otú ị ga-esi egosi mmasị n’ebe ndị ọzọ nọ ma lekwasị anya n’ihe ị na-eme? Tupu gị ekwuwe banyere onye ọzọ, jụọ onwe gị, sị: ‘Ihe a m chọrọ ikwu ọ̀ bụ eziokwu? Gịnị mere m ji chọọ ịkọrọ ya mmadụ? Olee otú a ga-esi na-ele m anya ma m gbaa asịrị?’ Ajụjụ ikpeazụ a dị mkpa n’ihi na ọ bụrụ na e jiri ịgba asịrị mara gị, ọ ga-eme ka a mata àgwà gị karịa nke onye ahụ i ji na-agba asịrị.
Ọ Bụrụ na E Ji Gị Gbaa Asịrị
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na e ji gị gbaa asịrị? Ekliziastis 7:9 dọrọ aka ná ntị, sị: “Adịla ngwa ná mmụọ gị ịbụ onye a kpasuru iwe.” Kama nke ahụ, gbalịa ka i lee ya anya otú kwesịrị ekwesị. Baịbụl sịrị: “Etinyekwala obi gị n’okwu niile ndị mmadụ pụrụ ikwu, . . . n’ihi na obi gị maara nke ọma na ọbụna gị onwe gị akọchawo ndị ọzọ ọtụtụ ugboro.”—Ekliziastis 7:21, 22.
N’eziokwu, o nweghị ihe ga-eme ka ịgba asịrị bụrụ ihe ọma. Ma, ọ bụrụ na i kwe ka asịrị e ji gị gbaa gbawa gị ara, o nwere ike ime ka e lewe gị anya ọjọọ karịa asịrị ahụ! Ọ ga-adị mma ma i mee ihe nyeere otu nwa agbọghọ aha ya bụ Renee aka. O kwuru, sị: “Mmadụ kwuo ihe ọjọọ banyere m, ọ na-ewe m iwe. Ma, m na-agbalị ile ya anya otú kwesịrị ekwesị. Ya bụ, n’ụbọchị ọzọ, ọ ka nwere ike ikwu banyere onye ọzọ ma ọ bụ ihe ọzọ.” *
N’ihi ya, mara ihe, gbalịsie ike ka mkparịta ụka unu ghara ịghọ asịrị. E kwuo ihe na-adịghị mma banyere gị, mee ka dimkpa, ekwela ka ọ gbaa gị ara. Mee ka ọrụ ọma gị na-ekwuchite ọnụ gị. (1 Pita 2:12) I mee otú ahụ, ị ga-eme ka gị na ndị ọzọ na-adị ná mma, meekwa ka gị na Chineke dịrị ná mma.
^ par. 21 Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịba uru ka ị mata ụzọ akọ ị ga-esi agakwuru onye asịrị ahụ. Ma, ọtụtụ mgbe, ọ gaghị aba uru ime otú ahụ, ebe ọ bụ na “ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.”—1 Pita 4:8.
“Onye na-eche ọnụ ya nche na-echebe mkpụrụ obi ya. Onye na-agbape ọnụ ekwu okwu—mbibi ga-abụ nke ya.”—Ilu 13:3.
Ọ bụrụ na a kọwara gị asịrị, i nwere ike ikwu, sị: “Anaghị m achọ ịkọ ụdị ihe a. A sị ka e kwuwe, onye ahụ anọghị ebe a ikwu otú ihe si mee.”
Naanị ige asịrị nwere ike ime ka i soro na ya. Ọ bụrụ na i kwe ka mmadụ kọwara gị asịrị, ị na-eme ka akụkọ ahụ na-agbasa ngwa ngwa!
Mgbe ọ bụla ọ dị m ka m̀ kọsawa ihe m nụrụ, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
Ọ bụrụ na ndị mmadụ ekwuo ihe na-adịghị mma banyere m, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● Olee mgbe e kwesịrị ikwu ihe gbasara ndị ọzọ?
● È jitụla gị gbaa asịrị, ya bụrụ otú ahụ, gịnị ka ị mụtara na ya?
● Olee otú iji ndị ọzọ agba asịrị ga-esi mebie aha gị?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 107]
“Amụtara m ihe mgbe onye m ji gbaa asịrị matara, bịa jụọ m banyere ya. O nweghị otú m ga-esi agọ agọ! N’eziokwu, amụtara m na ọ ka mma ịgwa mmadụ okwu ihu na ihu karịa ikwu ya okwu azụ!”—Paula
[Foto dị na peeji nke 108]
Asịrị dị ka ngwá agha jọgburu onwe ya nke nwere ike imebi aha onye ọzọ
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Dị Njọ n’Ịgba Asịrị?
yp2 isi 12 p. 105-110